Wejiga labaad ee dhageysiga dacwadda muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo maanta bilaabanaysa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wejiga labaad ee dhageysiga dacwadda muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya oo maanta bilaabanaysa
Waxaa maanta lagu wadaa inay halkeeda kasii socdaan dhageysiga dacwadda u dhaxeeysa Soomaaliya iyo Kenya ee ku aadan muranka Badda, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay rajo aad u weyn ka qabto inay dacwadaasi ku guuleysan doonaan.
Xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo ay wehlniiyaan la-taliyayaal Soomaali iyo qareeno caalami ah oo lagu kala magacaabo Paul Reichler oo u dhashay Mareykanka iyo Professor Allain Pellet oo isna u dhashay dalka Faransiiska ayaa maanta hor-tagi doona xeer-beegtida maxkamadda ICJ ee ku taala magaaladda Hague ee dalka Holland.
Dhinaca Soomaaliya ayaa lahaanshiyaha xuduud baddeedkaasi u cuskatay qodobadda 15, 74 iyo 83 ee heshiiska Qaramada Midoobay ee sharciga Baddaha oo lasoo saaray sannadkii 1982-kii oo ay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya wada saxiixeen sanadkii 1989-ka.
Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa doonaysa in dib loo calaamadeeyo xuduudka badda ee Kenya kala wadaagaan badweynta Hindiya, iyadoo lagu saleynayo xuduudka berriga ee ay labada dal wadaagaan.
Arrinkaasi oo ah in xuduud-baddeedka lagu saleeyo jihada uu kasoo bilaabanayo xuduudka berriga ee ay labada dal wadaagaan ayaa waxaa ka biyo diidsan dowladda Kenya.
Maalintii shalay ayay ahayd, markii ay ergadda dowladda Kenya oo uu horkacayay xeer-ilaaliyaha guud ee Kenya ay hor-tageen maxkamadda ICJ oo ay u gudbiyeen aragtida sharciga ee ay ku sheeganayaan lahaanshaha xuduud-badeedka lagu muransan yahay.
Xeer ilaaliyaha Kenya iyo mid ka mid ah qareenadda caalamiga ee difaacaya Kenya ayaa u sheegay xeer-beegtida ICJ inaysan haboonayn inay maxkamadda ICJ dhageysato garnaqsiga dacwadda Soomaaliya iyo Kenya, waxayna sheegeen inay hayaan qoraal heshiis is-faham (MOU) oo ay labada dowladood ka gaareen muranka xuduud-baddeedka.
Kariim Axmed Khaan oo ah Qareen u dhashay dalka Britain ee u doodaya dhinaca Kenya ayaa ku dooday in mid ka mid ah saxiixayaasha Soomaaliya ee heshiiskaaasi uu weli joogo, isla markaana aysan jirin sabab ay Soomaaliya heshiiskaasi uga laabato.
Dowladda Soomaaliya ayaa ku adkaysanayso inuu heshiiskaasi wax kama jiraan yahay, maadaama ay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya u codeeyeen inuusan heshiiskaasi ansax ahayn, isla markaana aanu waafaqsanayn dastuurka federaalka Soomaaliya.
Sidoo kale, xiisadda muran baddeedka Soomaaliya iyo Kenya ayaa soo bilawday bishii July ee sanadkii 2014-kii, kadib markii uu wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka C/raxmaan Ducaale Bayleh ka hadlay muranka xuduud-baddeedkaasi oo masaafadiisu dhan tahay 100,000-km oo isku wareeg ah.
Waxaa la rumeysan yahay inay keydad badan oo kaluun, shidaal iyo kheyraad kale dhex ceegaagaan xuduud-baddeedkaasi, iyadoo dowladda Kenya bilawday inay shirkaddo shisheeye ka howl-galaan xuduud-baddeedka lagu muransan yahay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa aad loogu rajo weyn yahay inay Soomaaliya ay ku guuleysato dacwadda ka socota Maxkamadda ICJ, iyadoo ay dowladdaha caalamka og yihiin inay Soomaaliya leedahay xuduud-baddeed ugu dheer qaraadda Afrika, kaasi oo dhererkiisu dhan yahay 3,333-km oo isku wareeg ah.